सुत्केरी भैँसीलाई पोषणभत्ता तीन हजार ! - Gulf Sandesh
सुत्केरी भैँसीलाई पोषणभत्ता तीन हजार !
July 28, 2018 July 28, 2018 GulfSandesh0Comments
म्याग्दी, मंगला गाउँपालिकाले सुत्केरी भैँसी पाल्ने किसानलाई पोषणभत्ता उपलब्ध गराउन थालेको छ।
सुत्केरी अवस्थाका गाईभैँसीको स्याहारसुसार र आहरामा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गराउनका लागि पशु आहरा सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको हो। यसवर्ष १९ भैँसीपालक कृषकलाई तीन हजारका दरले सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका पशुसेवा शाखाका प्रमुख दीर्घबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
कुहुँका आठ, बाबियाचौरका एक र बरंजाका १० कृषकलाई सुत्केरी भैँसीको आहराका लागि भत्ता उपलब्ध गराइएको हो। व्यवसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित गरी दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी वर्षमा समेत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने खड्काले बताए।
घाँसपातबाहेक अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा नदिँदा पशुको आयु कम हुने, विभिन्न रोगले सताउने, बिरामी हुने र दूध उत्पादन घट्ने समस्या छ।
यसैगरी मंगला गाउँपालिकाले पाँचजना व्यावसायिक बाख्रापालक कृषकलाई रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। हिदीका देवेन शर्मा, बमबहादुर पुन, थाइवाङका विश्वास पौडेल, कुहुँका रणबहादुर खत्री र बरंजाका पूर्ण आचार्यले बाख्रापालन व्यवसाय विस्तार र खोर सुधारका लागि अनुदान पाएका हुन्।
कुहुँका योगेन्द जुक्जाली, अर्मन धाराका वीरबहादुर खड्का, हिदीका बेलबहादुर विक, पखेरका डेकबहादुर थापा र भाइवाङकी थिरमती शर्माले उन्नत जातको बोका खरिद गर्न १५ हजारका दरले अनुदान पाएका छन्।
मंगला गाउँपालिका-४ मा बुकेनी व्यवसायिक उन्मुख बाख्रापालन समितिमार्फत बाख्रा पैँचो कार्यक्रम शुरु भएको छ। कार्यक्रममार्फत दुई वर्षअघि कुहुँको पैँयुपाटाको समूहलाई बाख्रा खरिदका लागि दिइएको अनुदान फिर्ता गरेर बुकेनीको समूहलाई उपलब्ध गराइएको छ।
पचास जना आबद्ध समितिअन्तर्गत १०-१० जनाका दरले पाँच वटा समूह बनाइएको छ। प्रत्येक समूहलाई उन्नत जातको बोका खरिदका लागि १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइएको छ।
बोका ढुवानीमा थप रु १० हजार अनुदान पाएका छन्। प्रतिकृषक तीन वटाका दरले बाख्रा खरिद गर्न नौ हजारका दरले चार लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ।
सो रकम कृषकलाई दुई वर्षपछि फिर्ता गरेपछि अर्को समितिलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया रहेको खड्काले जानकारी दिए। खोर मर्मतका लागि थप रु पाँच हजारका दरले दुई लाख पाँच हजार वितरण गरिएको छ।
← ब्रोकाउली खानुस क्यान्सर बाट जोगिनुस। कारण यस्तो छ
किसानहरुले तरकारी खेतीमा नयाँ प्रविधि अपनाउँदै →
गाई पालेर मासिक एक लाख रुपैयाँ बचत गर्दै !
October 31, 2018 GulfSandesh 0
सरकारले महिलालाई रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्न धेरै कुरामा छुट !थाहा पाउनुहोस् र सेयर गर्नुहोस।
सरकारले भागबन्डा मिलाउन कृषि मन्त्रालय टुक्र्याइँदै
July 28, 2018 GulfSandesh 0
Sharing is caring!ShareTweetPin0sharesभदौ ०५ काठमाडौँ ,राशिफलमा जे जस्तो लेखे पनि स्वस्थ रहनुहोस, मस्त रहनुहोस, खुसि रहनुहोस र मेहेनत गर्नुहोस भाग्य